Izindaba - Uwasebenzisa Kanjani Amakhemikhali Okwelashwa Kwamanzi 1
Uwasebenzisa Kanjani Amakhemikhali Okwelapha Amanzi 1
Manje sesinaka kakhulu ukwelashwa kwamanzi angcolile lapho ukungcola kwemvelo kuya ngokuya kuba kubi.Amakhemikhali okulungisa amanzi ayizinsizakusebenza ezidingekayo emishini yokuhlanza amanzi endle. Lapha sethula izindlela zokusebenzisa kumakhemikhali ahlukene wokuhlanza amanzi.
I-Polyacrylamide isebenzisa indlela: (Yezimboni, izindwangu, indle kamasipala njalonjalo)
Yehlisa umkhiqizo njengesixazululo esingu-0.1% -0,3%. Kungcono ukusebenzisa amanzi angathathi hlangothi ngaphandle kasawoti lapho uhluza (njengamanzi ompompi)
Sicela uqaphele: Lapho uhlunga umkhiqizo, sicela ulawule isilinganiso sokugeleza komshini wokulinganisa okuzenzakalelayo, ukugwema ukuhlangana, isimo senhlanzi nenso nokuvalwa kwamapayipi.
3.Ukushukunyiswa kufanele kube ngaphezu kwemizuzu engama-60 ngama-rolls angama-200-400 / min.Kungcono ukulawula ukushisa kwamanzi njengo-20-30 ℃, okuzosheshisa ukuncibilika.Kodwa sicela uqiniseke ukuthi izinga lokushisa lingaphansi kuka-60 ℃.
4.Ngenxa yobubanzi be-ph ububanzi lo mkhiqizo ongazivumelanisa nawo, umthamo ungaba ngu-0.1-10 ppm, ungalungiswa ngokuya ngekhwalithi yamanzi.
Ungayisebenzisa kanjani i-coagulant yokupenda: (Amakhemikhali asetshenziselwa ukwelashwa kwendle ngopende)
1. Emsebenzini wokudweba, ngokuvamile engeza upende wenkungu coagulant A ekuseni, bese ufafaza upende ngokujwayelekile. Ekugcineni, engeza inkungu yokupenda coagulant B isigamu sehora ngaphambi kokuphuma emsebenzini.
2. Iphoyinti lokulinganisa lokuqina kwenkungu yopende I-ejenti isendaweni yokuhambisa amanzi, futhi iphoyinti lokulinganisa i-ejenti B lisendaweni yokuhambisa amanzi.
3. Ngokwenani likapende wokufafaza kanye nenani lamanzi ajikelezayo, lungisa inani le-mist mist coagulant A no-B ngesikhathi esifanele.
4. Ukukala inani le-PH lamanzi ajikelezayo njalo kabili ngosuku ukuwagcina phakathi kuka-7.5-8.5, ukuze lo menzeli abe nomthelela omuhle.
5. Lapho amanzi ajikelezayo esetshenziswa isikhathi esithile, ukuqhutshwa kwenani, inani le-SS nokuqukethwe okuqinile okumisiwe kwamanzi ajikelezayo kuzodlula inani elithile, elizokwenza lo menzeli kube nzima ukuncibilika emanzini ajikelezayo bese kuthinta umphumela yalesi sisebenzeli. Kunconywa ukuthi uhlanze ithangi lamanzi bese ufaka amanzi ajikelezayo ngaphambi kokusetshenziswa. Isikhathi sokushintsha kwamanzi sihlobene nohlobo lukapende, inani lopende, isimo sezulu kanye nezimo ezithile zempahla yokumboza, futhi kufanele isetshenziswe ngokuya ngezincomo zikachwepheshe wasesizeni.